Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Antoine Griezmann Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Eke Ọhụụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Le Petit Diable'. Anyị Antoine Griezmann mannmụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Football Legend na French 2018 World Cup onye mmeri gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ obere amaara ama gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere egwuregwu ya na-eme ikike mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ akụkọ Antoine Griezmann nke gụnyere ịmatakwu banyere nne na nna ya, nwanne ya nwoke, nwanne ya, na ndụ ya wdg.
Ndụ ndị na-agba ọsọ na mpụga pitch bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Akụkọ Antoine Griezmann nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Antoine Griezmann na 21st nke Machị 1991 na Mâcon, France site n'aka Alain Griezmann (nna) na Isabelle Griezmann (nne).
A mụrụ ya na nna nwere ọgaranya bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na France. Nna ya bụbu onye kansụl obodo nke bara ọgaranya iji nye Antoine na-eto eto ihe niile ọ chọrọ mgbe ọ bụ nwatakịrị. Otú ọ dị, mama ya bụ onye na-ehicha ụlọ ọgwụ.
Ebumnuche football ya sitere na mmalite Portuguese. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọbara Portuguese na-agafe na akwara Antoine Griezmann.
Nna nna Antoine bụ Amaro Lopes bụ onye na-agbachitere onye na-agbachitere onye na-anọchite anya ndị Portuguese.
Antoine Griezmann nwatakiri ihe omuma - Bido na football:
Inwe nna nna nke bu ndi ama ama mere ka o nwee mmasi n'egwuregwu. Otú ọ dị, mmasị ikpeazụ nke Antoine bịara mgbe ọ na-ele ndị na-amasị Zinedine Zidane na Thierry Henry n'oge 1998 World Cup.
Nke a kpaliri ya mgbe ọ dị obere ka ọ banye n'egwuregwu football ma mesịa, nrọ ya ịmeghachi mgbe Zidane na Henry mere na uwe elu French.
Griezmann bụ onye na-akwado Lyon dịka nwatakịrị nwere ikike ịgba bọọlụ mgbe niile. N'ịbụ onye amụrụ kilomita 70 site na Lyon na Mâcon pụtara ohere maka ọrụ nwata ya.
Ọ gara mgbe ọ bụla ịnwale ọnwụnwa na nwata nwoke Lyon dị ka nwata, mana e weere ya dị ka ike na-enweghị ike ịbanye na agụmakwụkwọ ha ma jụ.
Griezmann laghachiri n'obodo ya wee malite ọrụ ya na-egwu maka obodo UF Mâcon. A nabatara ya ebe ahụ n'ihi mmetụta nna ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ya na ndị ọkachamara ọkachamara ndị ọzọ malitere ọzọ n'ọtụtụ ule iji nweta ohere n'otu ụlọ akwụkwọ ntorobịa ha.
A jụkwara ya ọzọ n'ihi na klọb jụrụ ajụjụ nha ya na ogo ya. Antoine Griezmann nọ n'oge ahụ dị obere maka afọ ndụ ya.
Thou nwere uwe ejiji na ejiji kachasị mma dị ka ụmụaka na-agba ọsọ ụmụaka. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ nwa ewu bara ọgaranya.
N'ikpeazụ, ọganihu dịịrị nwatakịrị ahụ. Na 2005, mgbe ya na Montpellier na-ekpe ikpe, Griezmann na-egwuri egwu na egwuregwu enyi megide ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Paris Saint-Germain na Paris, ma nwee mmasị n'ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu.
Ndị na-ahụ maka Spanish maka Real Sociedad bịara mmemme ahụ. Ha nwere mmasị na ya, n'adịghị ka ndị Skaụt ndị ọzọ.
Mgbe agbasoro egwuregwu ahụ ihe o meriri otu asọmpi, ndị isi ụlọ ọrụ ahụ nyere Griezmann otu izu ikpe na San Sebastián ikpe ikpe, nke ọ nakweere.
N'ihi ọganihu ya ugboro ugboro, e mechara nye Antoine ụlọ izu abụọ na klọb ahụ. Mgbe ha kwuru na ọ ga-abụ kpakpando, klọb ahụ kpọtụrụ ndị mụrụ ya wee nye Antoine ọrụ ntorobịa.
Ndị nne na nna Griezmann na mbụ achọghị ka nwa ha kwaga Spain. Mgbe ha rịọsịrị ọtụtụ arịrịọ, ha kwere ka ọ kwaga. Nke a bịara mgbe mmesi obi ike dị mma.
Mgbe mbụ ọ rutere Real Sociedad, Griezmann nọrọ n'ụlọ nke otu ndị French French scout ndị kpọpụtara ya na France.
O nwere ego iji chebe ụlọ ya mana ọ dị obere ka naanị ya biri. Ọbụna ọ gara ụlọ akwụkwọ n'ofe ókè ahụ na Bayonne. Ọ zụrụ ọtụtụ mgbede na isi ụlọ ọrụ.
N'oge na-adịghị anya Antoine chọpụtara na ya etolite site na obere nwa nwoke toro eto.
Otú ọ dị, O were ya oge ịbanye n'ime ìgwè mbụ nke Real Sociedad. Nke a bịara mgbe afọ anọ gasịrị na sistemụ ntorobịa.
Antoine Griezmann akụkọ nke na - Nkọwapụta:
N'oge okpomọkụ 2014, a ratara Griezmann na Atletico Madrid. Kpọmkwem na 28th nke July 2014, Atletico Madrid ruru nkwekọrịta na Real Sociedad maka ịnyefe Griezmann, maka ego a kwenyere na ọ dị nso na nke € 30 nde (£ 24 nde) ịzụta ego.
Ọ gafere ule ahụike n'otu ụbọchị ahụ wee bịanye aka na nkwekọrịta afọ isii na 29 July 2014. Ọ bụ onye ọkpụkpọ La Liga nke ọnwa maka Jenụwarị 2015 n'agbanyeghị na ọ pụtara naanị atọ n'ime egwuregwu ise Atlético.
Otu 2015 ahụ, a họpụtara ya dị ka naanị onye ọkpụkpọ ATM na otu n'ime mmadụ atọ na-aga n'ihu na Team of the Year na onyinye LFP n'akụkụ C. Ronaldo na Lionel Messi.
Kemgbe ahụ, ịrị elu ya ịchị achị dị iche. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndụ Antoine Griezmann:
NME: Nna ya Alain, onye bụ onye ndụmọdụ obodo, sitere n’eriri Alsatian. Nke a bụ otú aha nna German ya si bịa.
Ndị nne na nna Antoine Griezmann- Alain na Isabelle.
Nne: Nne ya Isabelle (nke dị n'elu) bụbu onye na-ehicha ụlọ ọgwụ. Ọ bụ onye sitere na Portuguese dị ka ekwuru na mbụ. Nna ya Amaro Lopes bụ onye na-asụ Portuguese maka FC Paços de Ferreira.
Amaro Lopes ya na nwunye ya bụ Carolina bịara France ịrụ ọrụ na-ewu ụlọ na 1957. Na France, a mụrụ nne Antione Isabelle. Papa ya nwụrụ mgbe nwa nwa ya bụ nwa ọhụrụ.
Dịka nwatakịrị, Griezmann na-ejikarị ezumike ya na Paços de Ferreira. Nke a bụ ebe ọ buliri football dị ka ọrụ.
SISTER: Nwanne nwanne nwanyị Antione Griezmann bụ Maude. Ọ bụ onye lanarịrị nnọchibido nke ụlọ ihe nkiri Bataclan na mwakpo November 2015 Paris, nke mere ebe ọ na-egwu megide Germany na Stade de France.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ onye njikwa ikike okike ya ugbu a.
Nwanne nwanyị Antoine Griezmann- Maude.
NNE: Antione nwere nwanne nwoke na-eto eto aha ya bụ Theo. Theo bụkwa onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara na Portuguese bọọlụ Sporting Macon (Dị ka n'oge ederede).
Young Antoine Griezmann na nwa nwoke nwoke-Theo.
Theo toro ogologo. Nke a bụ ihe akaebe na Antione nwere nsogbu dị ka nwata. Nke a bụ ihe mere ndị klọb ndị ntorobịa ji jụ ya.
Antoine Griezmann na nwanne.
Banyere Erika Choperena - Antoine Griezmann Nwunye:
Na June 2017, Antoine lụrụ enyi ya ogologo oge Erika Choperena. Ha nwere ihe ndi mmadu kpọrọ 'Wedding Wedding'.
Ọ bụ naanị ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya ka a kpọrọ. Onye egwu egwu ahụ na nwunye ọhụrụ ya jidere ndị mgbasa ozi na mberede mgbe ha wepụtara foto agbamakwụkwọ ha.
O weputara ihe oyiyi Instagram na-enye ọṅụ: "Un camino lleno de felicidad", nke a na-asụgharị na ya 'Ụzọ jupụtara na obi ụtọ'.
Antoine Griezmann lụrụ Erika.
N'ebe ibe ha, ha emeela ọtụtụ nkwa dị mma. Ọ bụrụ na ọ bụ ekwentị, n'ezie, Antoine ga-ahọrọ ịbụ chaja. Onye ọ bụla maara na ha ga-ejedebe ịlụ di na nwunye. Nke a mezuru.
Griezmann na nwunye ya tupu ha alụọ nwere otu nwa. Nwa nwanyi ha kpọrọ Mia Griezmann.
O doro anya, Antoine na-ebi ndu nzuzo ma ọ chọghị ka ihu nwa ya nwanyị kpughee mgbasa ozi.
Nwa nwanyi Antoine Griezmann- Mia.
Antoine Griezmann nwetara £ 520 nke ọma na ịdọ aka ná ntị… maka ime ememme ncheta ọmụmụ nwunye ya mgbe ọ gbasịrị.
Mgbe o kwusịrị na mmeri 3-0 nke ya na Valencia, ọ kpughere uwe elu ya na nwunye aka ya na nwunye ya: "Feliz Cumple Gordita", ma ọ bụ "Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ Chubby".
Ọ bụ ezie na ọ ga-abụrịrị na Erika nwere obi ụtọ na ngosipụta dị ụtọ nke ịhụnanya sitere na Griezmann, ndị Spanish FA ahụghị ihe ọchị ahụ. Ọ kwụrụ ụgwọ ahụ ngwa ngwa wee gaa n'ihu mee ka ịhụnanya maka ndụ ya nwee ụdị nke ha.
N'agbanyeghị nke ahụ, Antoine na-eme ihe n'eziokwu dị ka nke Robert Lewandowski, Roberto Firmino na Juan Mata.
Antoine Griezmann Biography - Hairdị Ntutu na Tdị Eziokwu:
Agbanyeghị, ụdị ntutu dị mma nke Griezmann na-enye echiche na ọ mara mma nke ukwuu ma nwee ụdị nnọkọ oriri na ọ .ụ partyụ.
Ọnwụ ya na-enye echiche dị iche. Nwoke France nwere ọtụtụ egbugbu metụtara okpukpe.
Eziokwu Antoine Griezmann - attdị.
Ogwe aka ya dị elu nwere ihe osise nke Jizọs mgbe ogwe aka ya dị ala gosipụtara rosary na igwe ojii na kpakpando.
A na-egbugbu aha nne na nna ya na ya. Antoine abụghị onye na-adụ ahụ ya n'enweghị ihe kpatara ya. Ọ bụ ezigbo okpukpe na akwara ya bụ ihe akaebe nke ihe niile.
Eziokwu Antoine Griezmann - Nnukwu Banyere:
Antoine Griezmann ejirila oge ọ bụla kwụsị ịnọchite anya otu mba France na mpaghara ọ bụla maka ihe karịrị otu afọ.
Omume a metụtara otu ihe mere ebe Griezmann na ụfọdụ ndị otu ya hụrụ na ha nọ n'ụlọ oriri na nkwari abalị nke Paris mgbe ha na ndị ọzọ ndị ọzọ nọ na ọzụzụ ọzụzụ na mgbago mgbago ugwu obodo ahụ.